Muslimiinta Uighur ee dalka Shiinaha oo si khasab ah uga shaqeeya warshado shisheeye |
Muslimiinta Uighur ee dalka Shiinaha oo si khasab ah uga shaqeeya warshado shisheeye
Kumannaan qof oo ka tirsan Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uighur ayaa ku shaqeeya duruufo adag, iyaga oo lagu khasbay in ay ka shaqeeyaan warshadaha alaabaha u sameeya shirkadaha ugu caansan caalamka, sida lagu sheegay warbixin cusub oo haatan la soo saaray.
Machadka daraasaadka Siyaasadda iyo Istaraatiijiyada ee dalka Australia ee magaciisa loo soo gaabiyo ASPI ayaa sheegay in arrintani ay tahay wejiga labaad ee “dib wax-u-barista” dadka Uighur-ka ee dalkaasi Shiinaha.
Saraakiisha dalkaasi Shiinaha ayaa sheegaya in xeryahani loogu talagalay in looga hortago afkaarta xag-jirnimada.
Warbixinta ASPI ayaa timid ka dib markii sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Shiinaha uu bishii Diseembar ee sanadkii hore warbaahinta u sheegay in dadka qowmiyaddaasi laga tirada badan yahay ee xeryahani ku jira ay hadda “qalin jebiyeen”.
Maxaa lagu sheegay warbixintani cusub?
Warbixinta ASPI waxaa lagu sheegay in intii u dhaxaysay sanaddadii 2017 iyo 2019, qiyaastii in kabadan 80,000 oo qof oo ka tirsan Muslimiinta Uighur laga qaaday gobolka fog ee ismaamulka Xinjiang, si ay uga shaqeeyaan warshadaha ku yaal guud ahaan dalkaasi Shiinaha. Machadka ASPI ayaa sheegtay in dadkani qaarkood si toos ah looga qaaday xeryaha lagu hayay ee ku yaal gobolkaasi Xinjiang.
Warbixintani ayaa sheegtay in ay “aad ugu adag tahay” dadkani Uighur-ka ahi in ay diidaan ama ka baxsadaan shaqooyinkaasi lagu khasbay, maadaama ay jirto hanjabaad ah in la xiri doono.
Waxay intaa ku dartay in ay jiraan caddeymo muujinaya in dowladda gobolka Xinjiang ay dowladaha hoose ee dalkaasi Shiinaha iyo shirkado dillaal ah oo gaarka loo leeyahay lacag ku siinayso qof kastaa oo shaqo lagu khasbo, arrintaa oo machadkani ASPI uu ku tilmaamay “wajiga cusub ee dowladda Shiinaha ay ku cabburinayso dadka qowmiyadda Uighur-ka.
Nathan Ruser oo ka mid ah dadka warbixintan soo saray ayaa BBC-da u sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in dadkani dhaqaale ahaan laga macaasho.
Wararka sheegaya in xeryo lagu hayo dadka qowmiyaddani ay dowladda Shiinaha ka dhistay gobolka Xinjiang ayaa markii ugu horreysay soo baxay sanadkii 2018. Masuuliyiinta dalkaasi Shiinaha ayaa sheegayay in “xarumaha tababarrada dhanka farsamada” loo adeegsanayo la dagaallanka afkaarta xag-jirnimada diimeed.
Balse waxaa jiray caddaymo muujinayay in dad badan loo xiray oo kaliya sababo la xiriira in ay gudanayeen waajibaadkooga diiniga ahi, sida in tukashada salaadda, xirashada xijaabka ama xitaa in ay xiriir la leeyihiin waddanka Turkiga.
Xukuumadda Beijing ayaa in muddo ahba wajahaysay cadaadis caalami ah oo ku aadan dhibaatada ay ku hayso Muslimiinta Uighur-ka.
Warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in barnaamijka is-weydaarsiga shaqaalaha ee dalkaasi Shiinaha uu yahay mid iskaa ah oo aan khasab ahayn. Warbixinta machadka ASPI ayaa lagu sheegay in saraakiisha dalkaasi Shiinaha ay beeniyeen in shaqaale la soo khasbay laga keensado gobolka Xinjiang.
Halkee ayay dadkani ka shaqeeyaan?
Warbixinta ASPI ayaa lagu ogaaday jiritaanka 27 warshadood oo ku yaal sagaal gobol oo ku yaal dalkaasi Shiinaha oo ay u shaqeeyaan shaqaale la soo khasbay oo u dhashay qowmiyadda Uighur oo laga keenay Xinjiang, kuwaa oo khasab ku shaqeynayay ilaa sanadkii 2017.
Warshadani ayaa sida lagu sheegay warbixintani waxay ku doodayaan in ay abaalta u sameeyaan ilaa 83 shirkadood oo dunida caan ka ah, waxaana shirkadahaasi ka mid ah Nike, Apple iyo Dell.
Warbixinta ASPI ayaa lagu sheegay in Uighur-ku caadiyan lagu khasbo in ay ku noolaadaan qolal gooni ah iyo in ay qaataan casharro ku saaban luuqadda Mandarin iyo sidoo kale “tababar xagga afkaarta ahi” oo ay tahay in ay qaataan saacado ka baxsan xilliga shaqada. Dadkani oo ilaalo xooggan laga hayo ayaan loo ogolayn in ay cibaadeystaan iyo in ay gutaan waajibaadkooga diiniga ahi.
Machadkani daraasaadka siyaasadda iyo istaraatijiyadda ee ASPI ayaa sheegay in shirkadaha shisheeye iyo kuwa Shiinahuba ay “suuragal tahay in ogaansho la’aan” ay ku lug yeeshaan xad-gudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, waxa uuna ugu baaqay in “si deg deg ah u baaraan xad-gudubyadaasi ka jira dhammaan warshadaha dalkaasi Shiinaha”.
Weriye ka tirsan wargayska the Washington Post ayaa booqday warshad ka mid ah warshadaha warbixintan lagu sheegay oo alaabaha u sameysa shirkadda Nike, waxaana wargayskaasi uu sheegay in warshaddaasi ay u egtahay xabsi, waxaana sida uu sheegay ku wareegsan silig, kaamerooyin iyo dhismooyin dadka laga ilaaliyo iyo saldhig boolis.
Haweeney u dhalatay qowmiyadda Uighur oo wargayskaasi ugu warrantay albaabka laga soo galo warshad ku taal magaalada Laixi ayaa sheegtay in ay dhex wareegi karaan gudaha magaaladaasi Laixi balse aysan ku laaban karin gobolka Xinjiang.
Shirkadda Nike waxay u sheegtay wargayska The Washington Post in ay “ka go’an tahay in ay ilaaliso qawaaniinta caalamiga ah ee shaqaalaha” isla markaana warshadaha alaabta u sameeyo ay mamnuuc ka tahay in ay ku shaqeystaan dad la khasbayo.”
Shirkadda Apple ayaa sidoo kale sheegtay in ay “ka go’an tahay in la hubiyo in qof walba oo u shaqeeya warshadaha alaabta u sameeyo loola dhaqmo sharafta iyo ixtiraamka ay mudan yihiin”, halka shirkadda Dell ay sheegtay in ay eegi doonto waxyaabaha lagu sheegay warbixintani machadka ASPI.